Maxey Rwanda usoo kabatay, Soomaaliyana weli aaney usoo kaban..? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxey Rwanda usoo kabatay, Soomaaliyana weli aaney usoo kaban..?
Asxaabey haddaan soo koobo, Maxey Rwanda usoo kabatay, Soomaaliyana weli aaney usoo kaban..?, bal qodobadan ila eega, aan kasoo ururshey wax badan oo laga qoray dalkan:-
1) Heshiis iyo Cafis:
Dadka reer Rwanda, Hutu iyo Tutsi, in kastoo 800 kun la xasuuqay, wexey ku heshiiyeen, in arrintaa laga gudbo, xanuunkeediina meela lagu xusuusto loo sameeyo, dadkuna is cafiyaan, dib u wada degaan, dalkana wadaagaan oo wada dhistaan, mustaqbal fiicanna ku hammiyaan. Waa mid aynaan weli samayn.
2) Maxkamad shacabka dhexdiisa ah in la sameeyey oo dadkii wax xasuuqay lagu maxkamadeeyey (ilaa 3000) oo nin xabsi lagu dhigay, innaguna weli abaal marin ayaynu siinaa, qabiilkana halyey buu u yahay!
3) Hogaan wanaagsan oo ku hamminaya dalkiisa iyo dadkiisa siduu horumar iyo isbedel wanaagsan u gaarsiin lahaa. Wasiir kasta waxaa loo asteeyaa mashaariicda laga rabo inuu fuliyo mudada 2 ama 3 sano ee uu jagada hayo, beero, wax barasho, cisbitaallo, haduusan kasoo bixinna waa xisaab adag.
4) Dadka muwaadiniinta iyo dawladda oo diyaar u wada noqda shaqo iyo hufnaan, 7am halka saac qofkaan xafiiskiisa joogin waa cayrin.
5) Musuq maasuqa oo si adag loola diriro, afrikana taasi wexey hirgeli kartaa oo keliya madaxa u sarreeyaa inuu musuqa isagu ka badbaado, sidaasna dawladda shaqaaleheeda lagaga badbaadsho haddiiba odagu ka tegey.
6) Maalgelinta dibadda ka timaadda oo waddada iyo nidaamka loo sahlo, taasoo keenta shaqo abuur iyo lacag adag.
7) Ku dayashada waddamada (Shabeellada Asia) ee ku guulaystey iney horumar dhaqaale iyo technoloji gaaraan sida (Korea, Malaysia, Taiwan, singapore,) iyaga oo cadaadis ka saaran yahay reer galbeedka, halka innagu aynu ku mashquulnay shirarka maaweelada iyo madadaalada, brussel, london, Rome etc.
Arrimahaas ayaa ka mid ah waxyaabaha laga faa’iidaysan karo, laakiin wexey dheceysaa keliya markii la helo (hogaan aan jeebab lahayn ama jawaanna tolan, ama jifidiisa wadan).
W/Q:- Sheekh Maxamed Idiris
Kenya to host it’s first Halal expo next month